(Madrid) 25 Nof 2020. Qandaraaskiisa haatan ciyaaryahan Luka Modric waxa uu ku eg yahay sanadka 2021-ka, inkastoo Kooxda Real Madrid aysan weli u kordhin heshiiska haddana 35-sano jirkaan khadka dhexe ayaa doonaya inuu Kabaha ku siibo Los Blancos.
Xiddiga reer Croatia ayaa sidoo kale qirsan inuusan ku soo bilaaban qaar ka mid ah kulamadii ugu dambeeyay ee Real Madrid sababo la xiriira go’aan farsamo, laakiin wuxuu tilmaamay, markasta oo uu garoonka ku jiro, inuu doonayo inuu sameeyo waxa ay u baahan tahay kooxdiisa si uu uga caawiyo inay guuleysato.
“Waxaan iri dhowr jeer [inaan doonayo inaan sii joogo Real Madrid], laakiin aan aragno waxa dhaca” ayuu Modric ku yiri shirka jaraa’id ee ka hor ciyaarta caawa.
“Had iyo jeer jawaab isku mid ah ayaan bixiyaa, waxaan dareemayaa reyn reyn iyo inaan doonayo sii wadashada waqtigeyga Real Madrid.
“Waxaan dareemayaa inaan caawin karo kooxda, haddii aad i weydiiso waxa aan doonayo dabcan waxaan doonayaa inaan sii joogo.
“Waxaan doonayaa inaan ciyaarahayga ku soo gabagabeeyo halkaan, laakiin waxay ku xiran tahay waxyaabo badan, balse ma jiro qof iigaga farxad badnaan doona haddii aan halkaan waayahayga ciyaareed ku soo gabagabeeyo.
“Waxaan dareemayaa fiicaan, kulammadaan aanan ciyaarin waxay ku xirnayd go’aanka Tababaraha, marka aan ciyaarayana waxaan isku dayaa inaan wax fiican sameeyo.
“Waxay wax badan ka hadlaan xaaladdeyda, balse aan aan ragno waxa dhaca Mustaqbalka”.